Great Wall of China, World’s Longest Structure | NU MYAT AROUND THE WORLD
Posted on November 2, 2017 November 2, 2017 by Nu Myat
တရုတ်နိုင်ငံက မဟာတံတိုင်းကြီးဟာ တရုတ်နိုင်ငံထဲ ဧရာမနဂါးကြီးတစ်ကောင် တောတွေ၊တောင်တွေ၊ လွင်ပြင်တွေကြား တက်လိုက်ဆင်းလိုက် ကွေ့လိုက်ကောက်လိုက် ဖြတ်ပြေးနေသယောင်ထင်ရပါတယ်။ မဟာတံတိုင်းကြီးက တကယ်ကိုအံ့သြစရာပါ။ လူတို့ပြုလုပ်ဖန်တီးတယ်လို့မထင်ရလောက်အောင် အထူးသဖြင့် နည်းပညာတွေ မထွန်းကားသေးတဲ့ ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာက လူတွေဖန်တီးထားတာဆိုတာ မထင်ရလောက်အောင် အံ့အားသင့်စရာပါ။ မဟာတံတိုင်းကြီးကိုအာကာသထဲကနေကြည့်ရင်တောင် လှမ်းမြင်ရတယ်ဆိုတာကတော့ ယုံတမ်းစကားပါ။ အရွယ်အစားကြီးမားရှည်လျားပေမဲ့ အာကာသထဲကနေလှမ်းမြင်ရလောက်တဲ့ အထိတော့ သိသာစွာကြီးမားမနေပါဘူး။
တရုတ်ပြည်အရှေ့ဘက်ကနေအနောက်ဘက်ကို ဆောက်ထားတဲ့ မဟာတံတိုင်းကြီးက ပြည်နယ်ပေါင်း၉ခုကိုတောင်ဖြတ်ပြီးတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး လူတို့ဖန်တီးတဲ့ ကမ္ဘာ့အရှည်လျားဆုံးအဆောက်အအုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တံတိုင်းကြီးက တဆက်တည်းဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ အပိုင်းအပိုင်းတွေ ဖြစ်နေပြီး တချို့အပိုင်းတွေက ဘေးတိုက်ပုံ၊ စက်ဝိုင်းပုံ၊ မျဉ်းပြိုင်ပုံဖြစ်နေပါတယ်။ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ မဟာတံတိုင်းအရှည်က ၅၅၀၀မိုင်ဖြစ်ပြီး တကယ့် နံရံတံတိုင်းကြီးအနေနဲ့ က ၃၈၈၉မိုင်၊ သဘာဝအတားအဆီးတွေဖြစ်တဲ့ တောတောင် မြစ်ချောင်းတွေက ၁၃၈၇မိုင်၊ ကတုတ်ကျင်းတွေက ၂၂၁မိုင်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ အခြားရှေးဟောင်းသုတေသနပြုချက်တစ်ခုအရ မဟာတံတိုင်းကြီးဟာ အခြား အခွဲတွေ အစိတ်အပိုင်းတွေအားလုံးပေါင်းစပ်လိုက်ရင်ဖြင့် မိုင်ပေါင်း ၁၃၁၇၀ကျော် ရှည်လျားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တံတိုင်းကြီးရဲ့ အကျယ်ဆုံးအပိုင်းက ပေ၃၀ရှိပြီး အမြင့်ဆုံးအပိုင်းက ၂၆ပေရှိပါတယ်။
တံတိုင်းကြီးတည်ဆောက်ခဲ့ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က တရုတ်ပြည်ကြီးကို အခြားနိုင်ငံတွေဝင်ရောက်ကျူးကျော်ခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ရန် အကာအကွယ်အဖြစ်အပြင် ကုန်သွယ်မှုနဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းအဖြစ်ပါ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ မဟာတံတိုင်းကြီးကို အုတ်၊ ကျောက်တုံး၊ မြေကြီး၊ သစ်သားစတာတွေနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အုတ်တွေကပ်နေအောင် ကောက်ညှင်းဆန်မှုန့်အသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ ခေတ်အဆက်ဆက်က စစ်သား၊ အကျဉ်းသား၊ အမိန့်နဲ့စေခိုင်းခံခဲ့ရတဲ့ တောင်ယာလုပ်သားတွေ၊ စစ်အကျဉ်းသားတွေက တည်ဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး မဟာတံတိုင်းကြီးကို ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသင်္ချိုင်းလို့လည်း ပြောလို့ရလောက်တယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ မဟာတံတိုင်းကြီးကိုဆောက်လုပ်နေစဉ်က လူပေါင်းသန်းချီအသက်စတေးခဲ့ရပြီး သေသွားတဲ့သူတွေရဲ့ ရုပ်အလောင်းတွေကို တံတိုင်းကြီးထဲမှာ မြှုပ်နှံခဲ့ကြတယ်လို့သိရတာကြောင့်ပါ။
သေဆုံးသူတွေမနည်းဆို ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကလည်း နည်းမှမနည်းခဲ့ပဲကိုး။ ခရစ်တော်မပေါ်ခင် နှစ်ပေါင်း၂၀၀ကျော်ကနေ မင်မင်းဆက် (1368-1644 ခုနှစ်) အထိ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀နီးပါးတည်ဆောက်ခဲ့ရတာတဲ့လေ။ အစပိုင်းက ဟိုတစ်ပိုင်းဒီတစ်ပိုင်းတည်ဆောက်ထားခဲ့ပြီး မင်မင်းဆက်မှာ အခုထင်ရှားနေတဲ့ မဟာတံတိုင်းကြီးအဖြစ် ဆက်လက်တည်ဆောက်ခဲ့ကြတာ။ ကာလရှည်ကြာလာတာနဲ့အမျှ မဟာတံတိုင်းကြီးက တဖြည်းဖြည်းပျက်စီးယိုယွင်းလာပါပြီ။ အထူးသဖြင့် အနောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ အစိတ်အပိုင်းဟာ ပျက်စီးမှုနှုန်းအလွန်မြန်ဆန်တာကြောင့် နောင်အနှစ်၂၀မှာ လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ ၁၉၆၆ကနေ ၁၉၇၆ခုနှစ်အတွင်းမှာ မဟာတံတိုင်းကြီးဆီက အုတ်တွေကို ဖြိုဖျက်ဖဲ့ယူကာ အိမ်ဆောက်ရာမှာ၊ ရေကာတာဆောက်ရာမှာ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုမဖြိုဖျက်ခဲ့ကြဘူးဆိုရင်ဖြင့် မဟာတံတိုင်းကြီးက အခုထက်ပိုပြီးတည်တံ့ခိုင်မြဲနေမှာပါ။
ကမ္ဘာကျော် မဟာတံတိုင်းကြီးဆီ လာရောက်လေ့လာသူပေါင်း တစ်နှစ်ကို ၁၀သန်းကျော်ရှိပါတယ်။ မဟာတံတိုင်းကြီးမှာလေ့လာနိုင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းများစွာရှိတဲ့အနက် ဘေဂျင်းမြို့နဲ့နီးတဲ့ Badaling နဲ့ Mutianyu ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေက နာမည်အကြီးဆုံးပါ။ လေ့လာသူတွေအဆင်ပြေအောင် သွားရလာရလွယ်ကူအောင် ပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်ထားတာပါ။ နဂိုမူလသဘာဝအတိုင်းရှိနေတာကို ကြည့်ချင်ရင်တော့ ရှုခင်းအလှဆုံးဖြစ်တဲ့ Jinshanling အပိုင်းကို သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီအပိုင်းရောက်ဖို့ တောင်တက်မှရမှာပါ။
ကျွန်မကတော့ မဟာတံတိုင်းကြီးဆီရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ၂ကြိမ်စလုံး Mutianyu အပိုင်းဆီ သွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘေဂျင်းကနေ တစ်နာရီခွဲလောက်မောင်းရုံနဲ့ရောက်နိုင်ပြီး အနီးဆုံးတောင်ခြေမှာ ကားရပ်ကာ တောင်ပေါ်ကို ကောင်းကင်ကြိုးရထား Cable Car နဲ့တက်ရတာပါ။ မဟာတံတိုင်းကြီးက အစပိုင်းမှာ ဧည့်သည်တွေနဲ့ ပြည့်ကျပ်နေပေမဲ့ ဝေးလေလူရှင်းလေပါ။ မဟာတံတိုင်းပေါ်ကမြင်ရတဲ့ရှုခင်းက အံ့မခန်းစရာပါ။ ကျွန်မ ဒုတိယအကြိမ် ရောက်ခဲ့တုန်းက ဆောင်းဦးကာလဖြစ်တဲ့အလျှောက် မဟာတံတိုင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိ တောင်ကုန်းတွေရဲ့ ကြွေရွက်ဝါတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ရှုခင်းက မှင်သက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်လှပါတယ်။
လှပခမ်းနားပြီး သမိုင်းဝင်တဲ့ မဟာတံတိုင်းကြီးကို ၁၉၈၇ခုနှစ်မှာ UNESCO က ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်(၇)ပါးစာရင်းထဲမှာလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြခံခဲ့ရပါတယ်။ မဟာတံတိုင်းကြီးဆီသို့တရုတ်ပြည်ရောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် မဖြစ်မနေသွားရောက်လေ့လာသင့်ကြောင်း ညွှန်းဆိုလိုက်ရပါတယ်။
This entry was posted in Asia, China, Heritage, Photo Essay, Uncategorized and tagged Asia, China, Nature, Travel. Bookmark the permalink.
← စုံတွဲတွေရဲ့အိပ်မက်ကျွန်းလေး Santorini
Sydney Harbour & Opera House →